Governemanta vaovao Sahiran-tsaina ny mpanao politika amin`ny propagandy
Misamahotaka avokoa ny rehetra, indrindra ny praiminisitra. Nilaza ny lehiben`ny governemanta Ntsay Christian nandritra ny famindram-pahefana natao tamin`Atoa Mahafaly Olivier fa praiminisitry ny marimaritra iraisana ny tenany. Midika izany fa voavaha ny olana ara-politika eto amintsika. Tsy tokony hibaribary loatra kosa anefa ny ady seza fa olona manana hevitra mahomby ao anatin`ny fotoana fohy no ilaina. Governemanta tokony hamaha ny fitakiana eny amin`ny 13 mey no handray ireo raharaham-panjakana rehetra. Mipetraka kosa ny fepetra fa izay miditra ao anatin`ny governemanta dia tsy mahazo manao propagandy. Teknisianina ho an`ny fifidianana fotsiny no tokony handrafitra ny governemanta NTSAY. Raha ny lojika, ireo mihevitra ho kandidà ihany koa dia tsy maintsy mametra-pialana amin`ny andraikiny amin`ny maha minisitra azy raha toa ka voatendry amin`izany andraikitra lehibe izany. Marihana kosa fa ho hentitra ny fanaraha-maso amin`ity fifidianana ity.